“ပဲစလေ့ေး’ရယျလို့ နာမညျပွောငျတှငျခဲ့တဲ့ မက်ကဆီကို တိုကျစဈမှူး ခြီခြာရီတိုဟာနနျဒကျဈဟာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအတှကျ ၅နှဈကွာ ကစားပေးခဲ့သူပါ။
၅နှဈတာအတှငျး ၁၅၇ ပှဲကစား၊ ၅၉ ဂိုးသှငျးခဲ့ပါတယျ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျမှာ အောငျမွငျခဲ့ပမေယျ့ အသငျးမပွောငျးခငျ ဂန်ထဝငျနညျးပွ ဖာဂူဆနျနဲ့ဖုနျးပွောတော့ တျောတျောလေး အကွပျတှခေဲ့ပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ စကော့သံဝဲဝဲနဲ့ ဖာဂူဆနျရဲ့ အင်ျဂလိပျစကားကို နားလညျအောငျ တျောတျော သူ ကွိုးစားခဲ့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဖာဂူဆနျလကျအောကျမှာ တကယျ ကစားခှငျ့ရတဲ့အခြိနျမှာတော့ နညျးပွကွီးအတှကျ ဘာပဲလုပျရရ အစှမျးကုနျကွိုးစားပေးဖို့အထိ သူ ဆုံးဖွတျထားပါတယျ။
ဒီအကွောငျးတှကေို မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျမီဒီယာနဲ့အငျတာဗြူးမှာ ခြီခြာရီတိုက အခုလို ပွောပါတယျ။
“ကနြေျာ့ကို ဆာအဲလကျဈဖာဂူဆနျချေါလာတဲ့ဖုနျးကောက ဖွဖေူးသမြှတှထေဲ အရှုပျထှေးဆုံးနဲ့နားလညျရအခကျဆုံးဖုနျးကောတဈခုပါပဲ၊ ကိုယျ့လူရေ!
ဆာအဲလကျဈရဲ့စကော့တလနျလယေူလသေိမျးကွီးကဗြာ ….. ဆာအဲလကျဈကနြေျာ့ကိုဖုနျးချေါလာတဲ့အခြိနျမှာ အဲ့ဒီ စကော့တလနျလသေံဝဲနတေဲ့အင်ျဂလိပျစကားကို ကနြျော တျောတျောနားလညျရခကျနတေယျ။
သူက မနျခကျြစတာမှာ၊ ကနြျောက ဂှာဒါလာဂြာရာမှာ။ ဖုနျးပွောဖူးတာကလညျး ဒါပထမဆုံးပဲ။
ဒီတော့ ကနြေျာ့ဘဝမှာ ဖုနျးကောတဈခုကို ဒီလောကျကွီးထိအာရုံစိုကျပွီးတဈခါမှမပွောခဲ့ဖူးဘူး၊
ကနြျောအပါအဝငျ ကနြေျာ့မိသားစုနဲ့ညစာအတူစားခငျြတယျလို့ သူပွောတယျ။
အဲ့ဒီညစာစားပှဲမှာ သူ့ကိုယျသူမိတျဆကျပွသှားတာတှေ၊ လူကွီးလူကောငျးတဈယောကျလိုဆကျဆံပုံတှေ၊ ကနြေျာ့မိသားစုအပျေါဆကျဆံပုံတှကေိုကွညျ့ပွီး ကနြျောစဉျးစားမိတယျ၊။
ဒီနညျးပွအတှကျ ကှငျးထဲမှာငါ့ကိုယျငါစတေးရမယျဆိုရငျလညျး ငါစတေးပဈလိုကျမှာ။ သခြောတယျ။
ငါ သခြောပေါကျ ဘာဖွဈဖွဈကိုလုပျမှာ။ ယုံဖို့တော့ခကျလိမျ့မယျ။
ဆာအဲလကျဈဖာဂူဆနျဆိုတာ ကနြေျာ့အတှကျ အံ့ဩဖို့ကောငျးတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတဈယောကျပါပဲ”လို့ ခြီခြာရီတိုက ပွောပါတယျ။
ခြီခြာရီတိုဟာ အခုအခါ မဂြောလိဂျကလပျ လော့ဈအိနျဂလြိဈအကျဖျစီမှာ ကစားနပွေီး အိမျထောငျရေးပွဿနာကွောငျ့ စိတျညဈစရာတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပမေယျ့ ကလေး ၂ဦးအတှကျ ဘဝကို အကောငျးဆုံးရငျဆိုငျသှားဖို့ ဆုံးဖွတျထားပါတယျ။
ဟာနနျဒကျဈဟာ သွစတွေးလမြျောဒယျ ဆာရာခိုဟနျနဲ့ လကျထပျခဲ့ပွီး ကလေး ၂ ဦးရခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ၂၀၂၁ခုနှဈ၊ နှဈဆနျးပိုငျးကတညျးက အိမျထောငျရေးမပွလေညျတာတှရှေိခဲ့ပွီး အခုတော့ တရားဝငျကှာရှငျးသှားပါပွီ။
သတငျးတှအေရ ဆာရာခိုဟနျဟာ မက်ကဆီကို သမိုငျးလလေ့ာရေးပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ဒရေးဖပျဈနဲ့ ငွိစှနျးခဲ့တယျလို့ဆိုထားပမေယျ့ ကာယကံရှငျတှကေတော့ ဒါကို ငွငျးဆိုထားပါတယျ။
ဖာဂူဆန်အတွက် ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရဆိုတဲ့ ချီချာရီတို
“ပဲစေ့လေး’ရယ်လို့ နာမည်ပြောင်တွင်ခဲ့တဲ့ မက္ကဆီကို တိုက်စစ်မှူး ချီချာရီတိုဟာနန်ဒက်စ်ဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက် ၅နှစ်ကြာ ကစားပေးခဲ့သူပါ။ ၅နှစ်တာအတွင်း ၁၅၇ ပွဲကစား၊ ၅၉ ဂိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် အသင်းမပြောင်းခင် ဂန္ထဝင်နည်းပြ ဖာဂူဆန်နဲ့ဖုန်းပြောတော့ တော်တော်လေး အကြပ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် စကော့သံဝဲဝဲနဲ့ ဖာဂူဆန်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို နားလည်အောင် တော်တော် သူ ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖာဂူဆန်လက်အောက်မှာ တကယ် ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ နည်းပြကြီးအတွက် ဘာပဲလုပ်ရရ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးဖို့အထိ သူ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မီဒီယာနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ချီချာရီတိုက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော့်ကို ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ခေါ်လာတဲ့ဖုန်းကောက ဖြေဖူးသမျှတွေထဲ အရှုပ်ထွေးဆုံးနဲ့နားလည်ရအခက်ဆုံးဖုန်းကောတစ်ခုပါပဲ၊ ကိုယ့်လူရေ! ဆာအဲလက်စ်ရဲ့စကော့တလန်လေယူလေသိမ်းကြီးကဗျာ ….. ဆာအဲလက်စ်ကျနော့်ကိုဖုန်းခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီ စကော့တလန်လေသံဝဲနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကို ကျနော် တော်တော်နားလည်ရခက်နေတယ်။ ဖုန်းကိုင်ပြီးဗျာများနေတဲ့ကျနော်ပေါ့၊ ခင်ဗျားတို့ပုံဖော်ကြည့်။ သူက မန်ချက်စတာမှာ၊ ကျနော်က ဂွာဒါလာဂျာရာမှာ။ ဖုန်းပြောဖူးတာကလည်း ဒါပထမဆုံးပဲ။ ပြီးတော့ ဖုန်းလိုင်းအနေအထားကိုလည်းထည့်တွက်ဦး။ ဒီတော့ ကျနော့်ဘဝမှာ ဖုန်းကောတစ်ခုကို ဒီလောက်ကြီးထိအာရုံစိုက်ပြီးတစ်ခါမှမပြောခဲ့ဖူးဘူး၊
ကျနော်အပါအဝင် ကျနော့်မိသားစုနဲ့ညစာအတူစားချင်တယ်လို့ သူပြောတယ်။ အဲ့ဒီညစာစားပွဲမှာ သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပြသွားတာတွေ၊ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်လိုဆက်ဆံပုံတွေ၊ ကျနော့်မိသားစုအပေါ်ဆက်ဆံပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ကျနော်စဉ်းစားမိတယ်၊။ ဒီနည်းပြအတွက် ကွင်းထဲမှာငါ့ကိုယ်ငါစတေးရမယ်ဆိုရင်လည်း ငါစတေးပစ်လိုက်မှာ။ သေချာတယ်။ ငါ သေချာပေါက် ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်မှာ။ ယုံဖို့တော့ခက်လိမ့်မယ်။ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ဆိုတာ ကျနော့်အတွက် အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပါပဲ”လို့ ချီချာရီတိုက ပြောပါတယ်။
ချီချာရီတိုဟာ အခုအခါ မေဂျာလိဂ်ကလပ် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်အက်ဖ်စီမှာ ကစားနေပြီး အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာကြောင့် စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပေမယ့် ကလေး ၂ဦးအတွက် ဘဝကို အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဟာနန်ဒက်စ်ဟာ သြစတြေးလျမော်ဒယ် ဆာရာခိုဟန်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ကလေး ၂ ဦးရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ နှစ်ဆန်းပိုင်းကတည်းက အိမ်ထောင်ရေးမပြေလည်တာတွေရှိခဲ့ပြီး အခုတော့ တရားဝင်ကွာရှင်းသွားပါပြီ။ သတင်းတွေအရ ဆာရာခိုဟန်ဟာ မက္ကဆီကို သမိုင်းလေ့လာရေးပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒရေးဖပ်စ်နဲ့ ငြိစွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပေမယ့် ကာယကံရှင်တွေကတော့ ဒါကို ငြင်းဆိုထားပါတယ်။